Ubani Othi Amakamelo Okugeza Amancane Angeke Abe Isiphetho Esiphezulu? Izindlela Ezingu-11 Zokuzenza Zikhudlwana Futhi Zibe Zinhle Kakhulu - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Donsela Phansi Oompompi Bekhishi
Khipha ompompi basekhishini
Embizeni Filler Ikhishi ompompi
Ompompi Bekhishi BaseBridge
Ompompi Bakhishi BaseKhishi
Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile
Oompompi Bokugeza BaseCenterset
Amanzi ompompi Bokugeza Amanzi
Izinzwa zokugeza ompompi
Khipha Oompompi Bokugeza
Odongeni Mount ompompi
Ama-Showerheads aphathwa ngesandla
Wowow isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Ukufakwa
Odongeni Mount Sink ompompi
Ikhaya / Blog / Ubani Othi Izindlu Zokugeza Ezincane Azinakuba Ephakeme? Izindlela eziyi-11 Zokwenza Bakhulu Futhi Zihle Kakhulu
Ubani Othi Izindlu Zokugeza Ezincane Azinakuba Ephakeme? Izindlela eziyi-11 Zokwenza Bakhulu Futhi Zihle Kakhulu
2021 / 09 / 18 UkwahlukanisaBlog 1798 0
Isikole Sebhizinisi Lase Bathroom
Ungayihlobisa kanjani indlu yokugezela ngamanani aphezulu nendawo encane? Akulula ukufaka izinto zangasese, amakhabethe okugeza, osinki, izihlambi endlini yokugezela, ingasaphathwa eyokukhuluma ngesitayela sanamuhla? Eqinisweni, akunjalo, inqobo nje uma uhleleka ngobuhlakani bemikhiqizo yakho yokugezela, indlu yangasese ayikwazi ukubukeka kahle kakhulu kepha futhi isebenza ngokugcwele, ungathola nokusebenzisa isikhala ngokukhululeka.
Ukuhambisa indawo yangasese
Shift indlu yangasese isuke endaweni yayo yendabuko emaphakathi iye “kunxantathu okhohliwe” endlini yokugezela. Yikhumbule lapho usendlini yangasese, uyikhohlwe lapho umatasa, futhi wandise isikhala esikhona endlini yakho yokugezela. Ngale ndlela ngeke zisaba khona izimo eziyihlazo lapho indlu yangasese “ingamehlo” noma “isikhubekiso”.
Uma uzwa ukuthi usinki waphansi uyisikhala esivelele kakhulu, zama ukumisa usinki obekwe odongeni. Ukulinganisa udonga olungu-180 ° noma i-engela yodonga olungu-90 °, kwephula ukuma kwendabuko okusaqanda.
Ungakhetha umzimba omise okwe-fan noma unxande ongena esikhaleni, ngohlelo lokuhambisa udonga olwakhelwe ngaphakathi. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esincane sibukeka silula futhi sivinjelwe. Le ndawo yokugezela ibukeka iyintsha futhi iyakha.
Esikhaleni esincane sendawo yokugezela, ukwakheka okubekwe odongeni nakho kufaneleka ompompi. Ukusetshenziswa okuvamile kwabantu endlini yokugezela emini yipompi, ngakho-ke indawo etholakalayo ezungeze umcengezi ompompi ibaluleke kakhulu. Ukufaka ompompi abafakwe odongeni kuzokonga isikhala futhi kwenze indlu yangasese ibukeke yinde kakhulu ngaphezu kokonga isikhala.
Yandisa ikhabethe lokugezela
Uma unciphisa ubukhulu bekhabethe lokugezela, lizonciphisa ukusebenza kwalo, ngakho-ke ungabeka kanjani ikhabethe lokugezela endaweni encane? Impendulo ithi - ukuyikhulisa. Ukuthuthuka koqobo kokuma kokuthuthuka okuqondile. Iphezulu icwebezela mhlophe futhi izacile ilenga odongeni, ngaleyo ndlela kudedela indawo yokugezela. Isitayela sayo sisezingeni eliphezulu futhi sesimanje.
IKhabinethi yokugezela iKhabethe
Ukufaka isibuko ebusweni bekhabethe lokugezela kuhle ekwandiseni isikhala endlini encane yokugezela. Ngoba bahlanganisa imisebenzi emibili ibe munye, abagcini nje ngokugcina isikhala nezindleko zokufaka isibuko, kodwa futhi basebenzisa isimiso sokubukisa ukwandisa umphumela wokubuka kuyo yonke indlu yokugezela.
Inhlanganisela yeyunithi yomzimba
Hlanganisa imikhiqizo ehlukahlukene yokugezela njengamathoyilethi, amasinki namakhabethe okugezela ndawonye ukwakha iyunithi ephelele. Lokhu kuyisinqumo esihle kakhulu sezindlu zangasese ezincane zesimanje futhi kuyinto ethandwa kakhulu empilweni yasemadolobheni eYurophu naseMelika namuhla.
Ithangi lamanzi lendlu yangasese lifakwe kwikhabethe lokugezela. Amanzi avela kusinki engenhla agcinwa ethangini. Inobukhulu obukhulu futhi isitayela silula. Lokhu akugcini ngokusikhulula kakhulu isikhala, kodwa futhi kuthuthukisa ukusebenza kahle kokusetshenziswa kwamanzi, okuluhlaza futhi okunobungani emvelweni.
Igumbi lokugeza lisebenzisa i-quadrant engenacala
Njengesikhala esincane, esizimele endlini yokugezela, igumbi lokugeza elingabekiwe kahle lingenza indlu yangasese ibonakale iminyene futhi inyinyekile. Inketho ethandwayo namuhla ukusebenzisa ikona noma isikhala sesikhala esigobile egumbini lokugezela. Ukufaka ishawa ngomngcele ofiphalisiwe noma ngaphandle kwe-quadrant yohlaka kunganciphisa ukuzimela kweshawa futhi kukwenze kuhlangane nendawo yokugezela ngokombono.
Sebenzisa izikrini zokugeza esikhundleni samakhethini eshawa
Endaweni encane yokugezela, abantu bavame ukuthola amakhethini eshawa alungele ukusetshenziswa futhi amboze indawo encane. Eqinisweni, amakhethini eshawa angaphula ubuqotho besikhala futhi enze indawo yokugezela ibukeke i-claustrophobic futhi inamandla. Isikrini sokugeza esikhundleni sekhethini leshawa naso siyindlela ethandwayo namuhla. Isikrini seshawa singavele sihlukanise izindawo ezimanzi nezomile, kepha futhi sivumela ukukhanya ukuthi kwandiswe nendawo yonke yokugezela ikhanye futhi ibanzi.
Ukufaka iradiyetha yesitebhisi esiqondile
Iradiyetha yesitebhisi emile isusa indawo yokugezela iye phezulu nangaphansi kunokukhulisa ngakwesobunxele nangakwesokudla, ngakho-ke ithanda ukonga isikhala esithe xaxa kunomklamo ovundlile noma ogobile. Ngaphezu kwalokho, ama-radiator esiteji eshisayo agcina amathawula efudumele futhi enethezekile. Kubuye kube lula kakhulu lapho ukhipha amathawula.
Kukhanyise umbala wendlu yangasese
Izindlu zangasese ezincane zesikhala ngokuvamile azifanele futhi zisebenzisa imibala eminingi. Imibala eminingi kakhulu exubile izokwenza ukuthi isikhala sibonakale singcolile futhi siminyene, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa imibala eqinile kusikimu sombala wokugezela. Sebenzisa okuluhlaza okwesibhakabhaka okumhlophe noma okukhanyayo ukuze kuthuthukise ukubonakaliswa kokukhanya endlini yangasese. Izakhiwo ezinemibala emnyama zingakhiqiza umphumela oqinile wokuqhathanisa nezindonga futhi zandise umqondo wesikhala kuyo yonke indlu yokugezela.
Nweba umthelela wombono wethayela
Indlu encane yokugezela ayifanele ukusebenzisa amathayela amakhulu osayizi. Esikhundleni salokho, ungasebenzisa amathayili amancane osayizi odongeni lokugezela ukunweba umugqa ovundlile, okwenza isikhala sivele isikhathi eside futhi sibe banzi, futhi ngesibindi usebenzise imigqa emile ukwenza indlu yangasese ibukeke iphakeme. Umphumela wokukhombisa we-tile surface nawo ubalulekile kuleli phuzu, futhi indawo emhlophe ecwebezelayo ephezulu kungenzeka ukuthi ikhulise umbono womphumela wesikhala.
Edlule :: Ingabe Ukukhanyisa Esigumbini Sakho Sokugeza Kungokwanele? Olandelayo: Izakhiwo Ezi-6 Ezidumile Ezingasetshenziswa kunoma iyiphi indawo yokugezela Kusukela ngo-3-9m2. Lapho Omakhelwane Babheka, Bonke Bafuna Ukudiliza Udonga Babuye Bafake!
Oompompi Bendawo Yokugeza BamaNickel Abashaywayo - Inketho Ehle Kuwe
2021 / 09 / 28 2909
Dala Uhlelo Lokuhlobisa Lokugeza Kwamakamelo Ngamapayipi Okugeza
2021 / 09 / 27 2854
Ukuthola I-Plumber Namathiphu We-Plumbing Ukunciphisa Ukusetshenziswa Kwamanzi
2021 / 09 / 25 3154
Amathiphu Wokugcina Oompompi Bakho Bokugeza Bengenabala futhi Bungavuza
2021 / 09 / 25 5054
Yenza Ikhishi Lakho Lihlakaniphe Ngompompi Bekhishi
2021 / 09 / 24 3238
Ompompi Bendawo Yekhishi - Ukukhetha Omuhle
2021 / 09 / 24 3130
Ompompi BamaSinki Abafihliwe
XHUMANA NATHI ENGEZA: 8 IGREEN STE A, KENT, DOVER CITY, DE, 19901. EU.SA INOMBOLO: (213) 290-1093 I-imeyili: sales@wowowfaucet.com
Iwaranti engu-6 yezinyanga